‘विदेशनीति समयानुकूल परिमार्जन गरौँ'
अन्नपूर्ण शुक्रवार, असोज २०, २०७४ 1353 पटक पढिएको
काठमाडौं : भारत, चीन र अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतले नेपालको विदेश नीतिलाई राष्ट्रिय स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि विश्वको बदलिँदो अवस्थालाई हेरी समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले बिहीबार आयोजना गरेको ‘नेपालको परराष्ट्र नीति समयानुकूल सुधारका लागि विशेष छलफलमा धारणा राख्दै भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय, चीनका राजदूत लीलामणि पौड्याल र अमेरिकाका राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीले ती देशसँगको नेपालको सम्बन्धको अवस्था र अब चाल्नुपर्ने कदमबारे बताएका हुन् ।
‘तीनैजना राजदूतले विश्वको बदलिँदो अवस्थालाई हेरेर विदेशनीति समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो', समितिका सदस्य श्याम श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने । श्रेष्ठले राजदूतहरूले भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धको अवस्था र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे सदस्यलाई बताएको उल्लेख गरे । राजदूत पौड्यालले नेपालले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाबाट फाइदा लिन आफ्नोतर्फबाट कदम चाल्नुपर्ने र नेपालले चिनियाँ बजारमा बिक्री गर्नसक्ने वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए । ‘चिनियाँ व्यापारीले गलैंचा, चियाजस्ता वस्तुको ठूलो परिमाणमा माग गरेको खण्डमा हामीले निर्यात गर्न नसक्ने अवस्था छ । हामीले व्यापार बढाउनेबारे चीनसँग के भन्ने ? ' उनले भने ।
नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण स्थानमा रहे पनि ५०-६० वर्षयता उही अवस्थामा रहेको परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत उपाध्यायले भारतमा नेपालप्रति सकारात्मक धारणा बन्दै गएकाले नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्न नहुने बताए । उनले नेपालको हित हुनेगरी भारतले पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंग्याउन चाहेको धारणा राखे । खुला सीमाका कारण भारतले नेपालसँगको सीमा सुरक्षाप्रति बढी संवेदनशीलता देखाउने गरेको उनले जानकारी दिए ।
अमेरिकाका लागि राजदूत कार्कीले अमेरिकाले नेपाललाई ५० अर्ब रुपयाँ बराबरको सहयोग हालै घोषणा गरेको चर्चा गर्दै नेपाल अमेरिकाको प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले नेपालको मानवअधिकार र विशेषगरी यहाँ रहेका तिब्बती शरणार्थीबारे अमेरिकाको गहिरो चासो रहेको बताए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालैको अमेरिका भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री महरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दिएको भोजमा सहभागी हुन नसकेको घटनाबारे राजदूत कार्कीले भने, ‘यो मिलाउने काम राष्ट्रसंघ मामिला हेर्ने न्यूयोर्क नियोगको हो । मलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलको सदस्यका रूपमा समेत सहभागी गराइएन । मैले यसबारे केही भन्न सक्दिनँ ।' कार्कीले अमेरिकाले नेपालमा प्रजातन्त्र सुदृढ भएको हेर्न चाहेको बताए ।
बैठकको अन्तिममा परराष्ट्रमन्त्री महराले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले विदेशीसँग गर्ने व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले नेपालले छिमेकीलगायत सबै मुलुकसँग मित्रवत व्यवहार गर्न चाहेको बताए । नेपालको गरिबीको फाइदा उठाएर केही विदेशी मुलुकले फाइदा लिन खोजेको बताउँदै उनले त्यसका लागि नेपाल आर्थिक समृद्धि र स्थिरतामा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण स्थानमा रहे पनि ५०-६० वर्षयता उही अवस्थामा रहेको बताए । ‘हामीले हाम्रो अवस्था माथि उठाउन सकेका छैनौँ', उनले भने । प्रधानमन्त्री देउवालाई बैठकमा डाकिए पनि उनी गएनन् । उनका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले नेपालको भूराजनीति संवेदनशील रहेको भन्दै गम्भीर भएर विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू, भारत तथा चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत, परराष्ट्र मामिलाका जानकारलगायत सहभागी बैठकमा पत्रकारलाई प्रवेश दिइएको थिएन । समितिले विदेश नीति परिमार्जन गर्नेबारे एक प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउने समितिका सभापति जेबी टुहुरेले बताए ।
शनिवार, माघ १३, २०७४ जापानमा नेपाली युवाको मृत्यु
मानवअधिकार आयोगको नाममा अर्बौं गोलमाल 12188
प्रदेश पदाधिकारीको तलब : कसको कति ? 11663
बालुवाटारबाट 'झुल्किए' नवराज सिलवाल 38045
कालो बोको ढालेर सरकारी निवासमा मुख्यमन्त्री (फोटो फिचर) 6274
चार लाख घुससहित शाखा अधिकृत पक्राउ 1511
टेलिकमले पनि ल्यायो ब्यालेन्स सापटी दिने सुविधा 8996